1Password Inodzokera uye Inodzorera Yemahara Yemunharaunda Vault | IPhone nhau
1Password inotsigira uye inodzorera mahara mavhavha emuno
Dzimwe nguva tinonyunyuta nezvekuti vateereri vashoma vanoteerera sei, uye tekinoroji makambani kune avo vashandisi, hongu, nguva nenguva tinoshamisika kuona kuti kune makambani sei anoda kuteerera kune avo vashandisi, kuona zvavanoda uye kuita shanduko zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi vezvishandiso zvavo. Ivo vashandisi, asi pakupera kwezuva ivo vatengi uye kuita saizvozvo chiito chikuru kwavari.
Mupfungwa iyi Tinoda kutaura nezve 1Password, Anwendung inotibvumidza kusevha mapassword edu ese uye kuti mumakore achangopfuura anga achichinja bhizinesi modhi richiitendeudzira kune yekunyorera modhi, uye zvakaipisisa. vakabvisa zvese zvemahara ... Asi sezvatinokuudza, dzimwe nguva zvakanaka teerera kune vako mushandisi-vatengi uye ndizvo zvakaitwa nevakomana pa1Password… Mushure mekusvetuka tinokuudza zvakawanda nezve shanduko dzavakaita muapp yavo.
Sezvatakataura, maCanada e1Password angadai akadzokera kumashure mushure mekunyunyuta kwese kwakagadzirwa paReddit uye kune mamwe masocial network kana 7.3.3Password iOS kugadzirisa 1 yakabvisa yemuno vault sarudzo, chekuchengetedza vakasununguka izvo zvakatibvumidza isu kushandisa iyo app tisingafanirwe kupfuura nemaseva ekambani uye chengetedza kunyoreswa. Izvi zvaireva kuti kana tichidzosera iyo app paIOS, iyi vault yemuno yaisakwanisa kugadziriswa kunyangwe dai takange tabhadhara mari pamberi kana kuti dai takatenga Pro kunyorera.
Shanduko yakaipa iyo yakatungamira kuzvichemo zvese izvi uye nekudzoserwa kumashure kweshanduko nevakomana pa1Password. Ivo vaburitsa vhezheni 7.3.4 ye1Password, vhezheni itsva iyo inodzorera kugona kwekugadzira yakazvimirira matumba kubva setup kune vatengi vakambotenga 1Password 4 yeIOS kana ye-in-Pro Pro yekutenga ficha. Saka ikozvino iwe unoziva, kana iwe uri 1Password vashandisi, mhanya kugadzirisa iyo app, iwe unenge uine iwo mabasa awakarasa zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 1Password inotsigira uye inodzorera mahara mavhavha emuno
Zvinonakidza kuona kuti vakaita sarudzo iyi. Muchidimbu, yazvino bhizinesi modhi ndeyekunyorera. Kana vakasateerera, zvakapusa sekumira kubhadhara uye vanogadzira vanozviziva, nekuti vanovimba neiyi imwechete bhizimusi modhi.
Ini ndinoshuva kuti Apple yanga isina kupusa uye ikateerera zvishoma kune isu tese.
Apple inoburitsa iOS 12.4 ye iPhone, iPad uye HomePod
Gwara rekutsanangudza neakanakisa iOS 13 hunyengeri - Chikamu I